Slimbook izvozvi zvakare ne AMD processor | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yeSpanish yakasimba Slimbook Akazviita zvakare, akatishamisa nekushamisika kunofadza, nekuti kusvika parizvino Intel microprocessors vanga vari pese pese mumatanho avo emidziyo. Asi ikozvino pachave neimwe nzira yeIntel Core i3, Core i5 uye Core i7 mushure mekuzivisa uku. Hongu unonzwa sei iyo Kymera renji ichaisawo AMD microprocessors seimwe nzira yeIntel. Nekudaro, iyo yakabudirira Zen-yakavakirwa AMD machipisi akadzorera iyo kambani kunorwa mukuita pamwe nezvakawanda zveIntel zvigadzirwa uye kuvapfuura ivo maererano nehunhu / kuita / mutengo, ichave iripo pamoyo weyaunofarira Kymera.
En los Kymera Ventus, iwe uchakwanisa kusarudza pakati peiyo iripo Intel microprocessors kana zvakare pakati peiyo AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5 uye AMD Ryzen 7 izvo zvino zvaverengerwa. Kana iyo Aqua renji, iyo yaunotoziva kuti ine simba uye yakasarudzika, iine kutonhora kwemvura uye modding inobata vatambi, iwe unogona chete kusarudza pakati peiyo Intel imwe nzira uye iyo AMD Ryzen 7 modhi, inova iko kushanda kwepamusoro kwese kwese mhando yezvigadzirwa zvinopihwa parizvino. na AMD. Kufamba kwakangwara naSlimbook kukwezva avo mafeni uye vateveri veiyo AMD femu vaisakwanisa kusarudza kutenga chigadzirwa neIntel chip. Chokwadi unoziva anopfuura mumwe chete anongoda zvekushandisa neADD, hazvo, ikozvino hauna chikonzero chekusatenga Slimbook. MuKymera zvido zvako zvese zvichanyungudika, mhando uye dhizaini yezvigadzirwa zveValencian firm, ine moyo wehunyanzvi we AMD neLinux sisitimu inoshanda… Unogona kukumbira zvimwe here?
Nenzira, yeuka kuti mamwe emamodeli e AMD Ryzen ari microprocessors uye kwete maAPU, saka havana GPU yakabatanidzwa, asi pachinzvimbo iyo yeGPU yakazvitsaurira ichafanirwa kusarudzwa. Nekudaro, Ryzen 3 uye Ryzen 5 vane dzakabatanidzwa Radeon Vega mhando ... Uye sezvo isu tiri kutaura nezve magirafu, taura kuti Slimbook zvakare inosvitsa AMD mifananidzo kadhi, kuti iwe ugone kusarudza kuti ako magirafu abudiswe ne AMD Radeon panzvimbo yeNVIDIA.
Mamwe mashoko - Slimbook
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Slimbook izvozvi zvakare ne AMD processor
Fedora 29 Beta: iyo yekutanga kugovera inosanganisira Gnome 3.30 "Almería"